Agromart | Agricultural Marketplace Nepal रुखकटहर खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. रुखकटहर कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ?
Q 2. रुखकटहरको वृद्धि र विकासको लागि कतिसम्मको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ ?
Q 3. रुखकटहरको खेती गर्न वार्षिक वर्षा कतिसम्म हुनु आवश्यक छ ?
Q 4. रुखकटहर खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
Q 6. रुखकटहरको बिरुवा कुन तरिकाले लगाउन उपयुक्त हुन्छ ?
Q 7. रुखकटहरका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
Q 8. रुखकटहरको बगैंचा स्थापना गर्दा रेखाङ्कन गर्न किन जरुरी छ ?
Q 9. रुखकटहरको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाड्ल खन्नु पर्दछ ?
Q 10. रुखकटहरको बिरुवा रोप्दा बिरुवा रोप्ने फ्ल्याक वा प्लान्टिङ्ग बोर्डको किन आवश्यक पर्दछ ?
Q 11. रुखकटहरको बगैंचामा सिंचाई गर्न जरुरी छ ?
Q 12. रुखकटहरमा मलखादको व्यवस्था कसरी गर्न पर्दछ ?
Q 13. नेपालमा रुखकटहरका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 14. नेपालमा खेती भैरहेका रुखकटहरका जातहरुको बारेमा जानकारी गराई दिनु हुन्थ्यो कि ?
Q 15. प्रशोधनका लागि पनि कुनै जात छन् ?
Q 16. रुखकटहरका बिरुवा प्रसारणको लागि कुन विधि अपनाइन्छ ?
Q 17. रुखकटहरको बगैंचामा अन्तरबाली लगाउन सकिन्छ ?
Q 18. रुखकटहरको फललाई कुन कुन रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
Q 19. रुखकटहरलाई छिटो पकाउन परेमा कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला ?
Q 20. यसको फललाई कसरी भण्डारण गरिन्छ ?
Q 21. रुखकटहरको प्रति बोट कति उत्पादन हुन्छ ?
Q 22. रुखकटहरमा गवारो कीराले कसरी नोक्सानी पुर्या उँछ र यसको रोकथाम विधि के छ?
Q 23. रुखकटहरमा मिलीबग कीराले कुन मौसममा र कसरी नोक्सानी पुर्याकउँदछ?
Q 24. रुखकटहरमा कस्ता कस्ता रोगहरु लाग्दछन् ?
Q 25. रुखकटहरको गुलाबी/पिंक रोग कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
Q 26. गुलाबी/पिंक रोगको रोकथाम कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 27. रुखकटहरको फल कुहिने रोगको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 28. फल कुहिने रोगको रोकथाम कसरी गर्नुपर्दछ ?